Iindaba - UMBONO WONYANGO OLUFANELEKILEYO
Imiboniso ye-LOFT Eyewear yiminyhadala yenkulumbuso ezimeleyo yemidlalo ebanjwa rhoqo ngonyaka kwiSixeko saseNew York, eLas Vegas ngoku eyiSan Francisco. Ukusukela ngo-2000, iminyhadala ye-LOFT ibonakalise abona baqulunqi bakhethekileyo kunye nabanqumli abasuka kwihlabathi liphela.
Siliqela labacinga into efanayo, abayili abazimeleyo ababelana ngomnqweno wokudala ukubukeka okuhle, ngamanye amaxesha kuyonwabisa, ngamanye amaxesha izambatho zamehlo zodidi lomthengi oqondayo. Siyakholelwa ukuba izakhelo zethu kufuneka zenziwe isitayile kwaye zifakelwe ngabathengisi abazimeleyo beengcali abaziingcali ekulungelelaniseni izambatho zethu zamehlo kumyalelo kagqirha kunye nobuso bomsebenzisi wokugqibela.
Iindlela zethu ezahlukileyo zoyilo zomeleza kuphela umbono wethu oqhelekileyo wokuphucula isitayile semehlo kodwa, okona kubaluleke kakhulu, ukuba sonwabe. Ingqokelela yethu ezimeleyo ivela e-US, France, UK, Italy, Denmark, Germany, Austria nase Switzerland.
Indawo yokuhlanganisana yabantu abathanda iso. Amabhanti asuka eKirk naseKirk, u-Anne Et Valentin, uBlake Kuwahara, iTyuwa emva koko ezinye zikuvumela ukuba uchithe imvakwemini phantsi kophahla olunye ubona iimveliso ezininzi kwaye uthatha inxaxheba kwingqondo ethembela kwezimvo kunye namava. Unokuthatha ikhefu ukuthatha uluvo uphahla kwaye uphefumle ngaphambi kokubetha kumgangatho wokubonisa.
ILoft ngumbono omnandi otshata abathengisi abathengisayo kunye neemveliso ezizimeleyo. Yindawo ekhuthaza uthungelwano kunye nobuchule ngaphakathi kwendawo yokunxiba yamehlo. Ndihlala ndijonge phambili ekuboneni uyilo olutsha oluvela kwaba baqulunqi babodwa nabenza izinto ezintsha.
ILoft yindawo efanelekileyo… bonke abathengisi abaphezulu kwindawo enye, umoya omkhulu kwaye ubona bonke oontanga bakho kwindawo enye. Ungahlala kwaye utye isidlo sasemini kunye nokufumana abanye abantu abasebenza kwilizwe liphela ... imvakalelo esondele ngakumbi ngokuqinisekileyo.
“… Kum kubonakala kusengqiqweni ukuphonononga indlela eyahlukileyo kuye wonke umntu”